လူတွေ အမှတ်မှားနေကြတဲ့ မြင်းကောင်ရေ (Horsepower)အကြောင်း - Tameelay
လူတွေ အမှတ်မှားနေကြတဲ့ မြင်းကောင်ရေ (Horsepower)အကြောင်း
လူတွေအမှတ်မှားနေတဲ့ မြင်းကောင်ရေ (Horsepower)အကြောင်း
အထက်တန်းအဆင့်လောက် စာသင်ဖူးတဲ့သူတွေဆိုရင် hp အကြောင်းကို သင်ခဲ့ရပါလိမ့်မယ်။ ရူပဗေဒ သင်ခန်းစာထဲမှာဆိုရင်တော့ What does mean hp ? လို့ မေးရင် မှန်အောင်ဖြေနိုင်ရင် တစ်မှတ်ရမှာပါ။ hp ရဲ့ အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်ကတော့ Work Done (အလုပ်ပြီးမြောက်မှု)လို့ အလွယ်ပြောလို့ရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် hp လို့ ဆိုလိုက်တာနဲ့ Work Done ကို မမြင်တော့ပဲ Horsepower ဆိုတဲ့အတိုင်း မြင်းတွေရဲ့စွမ်းအားလို့ အများက ထင်နေတတ်ကြပါတယ်။ ဥပမာ hp 500 ဆိုရင် မြင်းအကောင်ရေ အကောင်(၅၀၀)ရဲ့ စွမ်းအားနဲ့ ညီမျှတယ်လို့ လူတိုင်းက တွေးတတ်ကြပါတယ်။ တကယ်တော့ အမှားကြီး မှားပါတယ်။
ဥပမာအားဖြင့် ဆိုရသော်- Tesla S P90D အမျိုးအစား လျှပ်စစ်ကားမှာ ရှေ့ပိုင်းဟာ hp 250 ဖြစ်ပြီး၊ နောက်ပိုင်းကတော့ hp 503 ဖြစ်ပါတယ်။ နှစ်ခုပေါင်း hp ဟာ (700) ကျော်နေပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အဲဒီကားရဲ့ စွမ်းအင်ဟာ အားကောင်းမောင်းသန် မြင်းပေါင်း (၇၀၀)ကျော်နဲ့ ညီမျှတယ်လို့ ဆိုလိုတာ မဟုတ်ပါဘူး။ အဓိပ္ပါယ်တွေက သီးခြားဆီ ဖြစ်ပါတယ်။
သို့သော်လည်း မြင်းတစ်ကောင်ရဲ့ စွမ်းအင်ထုတ်လုပ်မှု အမြင့်ဆုံးအချိန်မှာ hp 14.9 အထိ ရှိပြီး၊ လူတစ်ယောက်ရဲ့ အမြင့်ဆုံးစွမ်းအင်ဟာ hp5ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် လူတိုင်းက စူပါဟီးရိုးတွေမဟုတ်တဲ့အတွက် လူတိုင်း မြင်း (၅)ကောင်နဲ့ညီမျှတဲ့ စွမ်းအားတွေပိုင်ဆိုင်နေတယ်လို့ ဆိုလိုတာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒီလောက်ဆိုရင် hp ဟာ မြင်းတွေရဲ့အရေအတွက် အကောင်ရေကို ပြောတာမဟုတ်ဘူးဆိုတာ မြင်သာစေလောက်ပါပြီ။
ဒါဖြင့် hp က ဘာကို ပြောတာလဲ …? hp တစ်ယူနစ်ဟာ မြင်းတစ်ကောင်ကို ရည်ညွှန်းတာ မဟုတ်ဘူးဆိုတာ သင့်အနေနဲ့ ရှင်းလင်းလောက်ပါပြီ။ သို့သော် hp ဆိုတာ မြင်းတစ်ကောင်ကို အလေးချိန်တစ်ခုခု သူ့ရဲ့ကျောပေါ်မှာသယ်စေပြီး အချိန်အတိုင်းအတာ တစ်ခုအတွင်းမှာ ရောက်သွားတဲ့ ခရီးအတိုင်းအတာကိုတော့ hp က ညွှန်းဆိုနိုင်ပါတယ်။ အမေရိကန် စံသတ်မှတ်ချက်ဆိုရင်တော့ 1 hp ဟာ 33000 Foot-pounds per minute ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါဟာ ဘာကို ဆိုလိုသလဲဆိုရင် မြင်းတစ်ကောင်ပေါ်မှာ (၃၃)ပေါင် အလေးချိန်ရှိတဲ့ ဝန်စည်တစ်ခုကို တင်ပြီး မောင်းနှင်တယ်ဆိုပါစို့၊ အဆိုပါ မြင်းဟာ တစ်မိနစ်အတွင်းမှာ ပေ(၁၀၀၀) သွားနိုင်ပါတယ်။ ဒီလိုပဲ ပေါင် (၃၃၀)အလေးချိန်ရှိတဲ့ ဝန်စည်နဲ့ မြင်းကို မောင်းမယ်ဆိုပါက တစ်မိနစ်မှာ ပေ (၁၀၀)သာ သွားနိုင်မယ်လို့ ဆိုလိုတာပါ။ သယ်ရတဲ့ဝတ္ထုပစ္စည်းက ပိုလေးလာတော့ ပိုပြီးပင်ပင်ပန်းပန်းစွဲရသလို၊ ခရီးရောက်မှုအတိုင်းအတာကလည်း ပိုနည်းသွားတဲ့ သဘောဖြစ်ပါတယ်။
hp ဆိုတဲ့ ယူနစ်ကို ဂျိမ်းစ်ဝပ်က တီထွင်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ hp ဟာ မြင်းတစ်ကောင်ရဲ့ အလုပ်လုပ်နိုင်စွမ်းကို အခြေခံတွက်ချက်တာဖြစ်ပါတယ်။ ဂျိမ်းစ်ဝပ်ရဲ့နည်းကို မက်ထရစ်စနစ်အသုံးပြုတဲ့ နိုင်ငံတွေက foot-lb အစား meter-kg နဲ့ အစားထိုးတွက်ကြပါတယ်။ ဂျာမန်တွေကတော့ hp ကို pferdestärke (PS) လို့ ပြောင်းခေါ်ပြီး၊ အီတလီတွေကတော့ cavalli vapore (CV) လို့ ခေါ်ဝေါ်ကြပါတယ်။ သို့ပေမယ့် အခြေခံအားဖြင့် တူပေမယ့် အမေရိကန်စံနှုန်းထက် (၁.၄)% အထိ လျှော့နည်းနေပါတယ်။ နောက်ထပ် မှတ်စရာတစ်ခုက hp ကို အရှည်စာလုံးနဲ့ ရေးရင် Horsepower လို့ ရေးမှ မှန်တယ်လို့ သိရပါတယ်။ ကြားထဲမှာ Space မခြားရပါဘူးတဲ့။ ဒါ့အပြင် hp ကို အက္ခရာအသေးစာလုံးတွေနဲ့ ရေးမှမှန်ကန်ပြီး HP ဆိုပြီး စာလုံးအကြီးနဲ့ မရေးရဘူးလို့ သိရပါတယ်။
လူတှအေမှတျမှားနတေဲ့ မွငျးကောငျရေ (Horsepower)အကွောငျး
အထကျတနျးအဆငျ့လောကျ စာသငျဖူးတဲ့သူတှဆေိုရငျ hp အကွောငျးကို သငျခဲ့ရပါလိမျ့မယျ။ ရူပဗဒေ သငျခနျးစာထဲမှာဆိုရငျတော့ What does mean hp ? လို့ မေးရငျ မှနျအောငျဖွနေိုငျရငျ တဈမှတျရမှာပါ။ hp ရဲ့ အဓိပ်ပါယျဖှငျ့ဆိုခကျြကတော့ Work Done (အလုပျပွီးမွောကျမှု)လို့ အလှယျပွောလို့ရပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ hp လို့ ဆိုလိုကျတာနဲ့ Work Done ကို မမွငျတော့ပဲ Horsepower ဆိုတဲ့အတိုငျး မွငျးတှရေဲ့စှမျးအားလို့ အမြားက ထငျနတေတျကွပါတယျ။ ဥပမာ hp 500 ဆိုရငျ မွငျးအကောငျရေ အကောငျ(၅၀၀)ရဲ့ စှမျးအားနဲ့ ညီမြှတယျလို့ လူတိုငျးက တှေးတတျကွပါတယျ။ တကယျတော့ အမှားကွီး မှားပါတယျ။
ဥပမာအားဖွငျ့ ဆိုရသျော- Tesla S P90D အမြိုးအစား လြှပျစဈကားမှာ ရှပေို့ငျးဟာ hp 250 ဖွဈပွီး၊ နောကျပိုငျးကတော့ hp 503 ဖွဈပါတယျ။ နှဈခုပေါငျး hp ဟာ (700) ကြျောနပေါတယျ။ ဒါပမေယျ့ အဲဒီကားရဲ့ စှမျးအငျဟာ အားကောငျးမောငျးသနျ မွငျးပေါငျး (၇၀၀)ကြျောနဲ့ ညီမြှတယျလို့ ဆိုလိုတာ မဟုတျပါဘူး။ အဓိပ်ပါယျတှကေ သီးခွားဆီ ဖွဈပါတယျ။
သို့သျောလညျး မွငျးတဈကောငျရဲ့ စှမျးအငျထုတျလုပျမှု အမွငျ့ဆုံးအခြိနျမှာ hp 14.9 အထိ ရှိပွီး၊ လူတဈယောကျရဲ့ အမွငျ့ဆုံးစှမျးအငျဟာ hp5ဖွဈပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ လူတိုငျးက စူပါဟီးရိုးတှမေဟုတျတဲ့အတှကျ လူတိုငျး မွငျး (၅)ကောငျနဲ့ညီမြှတဲ့ စှမျးအားတှပေိုငျဆိုငျနတေယျလို့ ဆိုလိုတာ မဟုတျပါဘူး။ ဒီလောကျဆိုရငျ hp ဟာ မွငျးတှရေဲ့အရအေတှကျ အကောငျရကေို ပွောတာမဟုတျဘူးဆိုတာ မွငျသာစလေောကျပါပွီ။
ဒါဖွငျ့ hp က ဘာကို ပွောတာလဲ …? hp တဈယူနဈဟာ မွငျးတဈကောငျကို ရညျညှနျးတာ မဟုတျဘူးဆိုတာ သငျ့အနနေဲ့ ရှငျးလငျးလောကျပါပွီ။ သို့သျော hp ဆိုတာ မွငျးတဈကောငျကို အလေးခြိနျတဈခုခု သူ့ရဲ့ကြောပျေါမှာသယျစပွေီး အခြိနျအတိုငျးအတာ တဈခုအတှငျးမှာ ရောကျသှားတဲ့ ခရီးအတိုငျးအတာကိုတော့ hp က ညှနျးဆိုနိုငျပါတယျ။ အမရေိကနျ စံသတျမှတျခကျြဆိုရငျတော့ 1 hp ဟာ 33000 Foot-pounds per minute ဖွဈပါတယျ။
ဒါဟာ ဘာကို ဆိုလိုသလဲဆိုရငျ မွငျးတဈကောငျပျေါမှာ (၃၃)ပေါငျ အလေးခြိနျရှိတဲ့ ဝနျစညျတဈခုကို တငျပွီး မောငျးနှငျတယျဆိုပါစို့၊ အဆိုပါ မွငျးဟာ တဈမိနဈအတှငျးမှာ ပေ(၁၀၀၀) သှားနိုငျပါတယျ။ ဒီလိုပဲ ပေါငျ (၃၃၀)အလေးခြိနျရှိတဲ့ ဝနျစညျနဲ့ မွငျးကို မောငျးမယျဆိုပါက တဈမိနဈမှာ ပေ (၁၀၀)သာ သှားနိုငျမယျလို့ ဆိုလိုတာပါ။ သယျရတဲ့ဝတ်ထုပစ်စညျးက ပိုလေးလာတော့ ပိုပွီးပငျပငျပနျးပနျးစှဲရသလို၊ ခရီးရောကျမှုအတိုငျးအတာကလညျး ပိုနညျးသှားတဲ့ သဘောဖွဈပါတယျ။
hp ဆိုတဲ့ ယူနဈကို ဂြိမျးဈဝပျက တီထှငျခဲ့တာ ဖွဈပါတယျ။ hp ဟာ မွငျးတဈကောငျရဲ့ အလုပျလုပျနိုငျစှမျးကို အခွခေံတှကျခကျြတာဖွဈပါတယျ။ ဂြိမျးဈဝပျရဲ့နညျးကို မကျထရဈစနဈအသုံးပွုတဲ့ နိုငျငံတှကေ foot-lb အစား meter-kg နဲ့ အစားထိုးတှကျကွပါတယျ။ ဂြာမနျတှကေတော့ hp ကို pferdestärke (PS) လို့ ပွောငျးချေါပွီး၊ အီတလီတှကေတော့ cavalli vapore (CV) လို့ ချေါဝျေါကွပါတယျ။ သို့ပမေယျ့ အခွခေံအားဖွငျ့ တူပမေယျ့ အမရေိကနျစံနှုနျးထကျ (၁.၄)% အထိ လြှော့နညျးနပေါတယျ။ နောကျထပျ မှတျစရာတဈခုက hp ကို အရှညျစာလုံးနဲ့ ရေးရငျ Horsepower လို့ ရေးမှ မှနျတယျလို့ သိရပါတယျ။ ကွားထဲမှာ Space မခွားရပါဘူးတဲ့။ ဒါ့အပွငျ hp ကို အက်ခရာအသေးစာလုံးတှနေဲ့ ရေးမှမှနျကနျပွီး HP ဆိုပွီး စာလုံးအကွီးနဲ့ မရေးရဘူးလို့ သိရပါတယျ။
ဒီ အချက်တွေကြည့်ခြင်းအားဖြင့် ငလျှင်​ အကြီးကြီးလှုပ်တော့မယ်ဆိုတာကို သိနိုင်ပါပြီ..
ငလျင်ကို ကြိုသိနိုင်ဘို့- ဗေဒင် မဟုတ်သော နည်းလမ်းများ ဖြစ်ပါတယ်။ အောက်ပါ တို့ကို လေ့လာပါ။ ၁) earthquake lights ဆိုတဲ့ ငလျင် အလင်းရောင်။ ငလျင်အကြီးကြီး တခု ဖြစ်တော့မယ် ဆိုယင်- ရက်အနည်းငယ် ကတည်းက- မြေကြီး နေရာ အချို့ကနေ- အလင်းရောင်း …
မြန်မာရဲ့ တစ်နာရီလုပ်အားခကို ကမ္ဘာနဲ့ယှဉ်လိုက်သောအခါ
မြန်မာရဲ့ တစ်နာရီလုပ်အားခကို ကမ္ဘာနဲ့ယှဉ်လိုက်သောအခါ ကိုယ့်ရဲ့တစ်နာရီဝင်ငွေ ဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတာကို တွက်ကြည့်ဖူးရဲ့လား။ တစ်လကို ၂ သိန်းလောက်ရတဲ့သူဆိုရင်တော့ စနေ၊ တနင်္ဂနွေကိုဖယ်လိုက်ရင် တစ်လကိုရက်နှစ်ဆယ် အလုပ်လုပ်ရပါမယ်။ အဲ့ဒါဆို တစ်ရက်လုပ်ခ ၁ သောင်းပေါ့။ တစ်နေ့ကို အလုပ်ချိန်က ရှစ်နာရီဆိုတော့ တစ်နာရီကို ၁၂၅၀ ကျပ်ရပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ အခြေခံအလုပ်သမားတွေအတွက် …
သတိထားဖွယ် ငရဲအနံ့ သင်းနေသော အလှူများ
ကုသိုလ် တစ်ပဲ ၊ ငရဲ တစ်ပိဿာ ဘုန်းကြီးတို့ငယ်ငယ်တုန်းကကြုံဖူးတယ်။ ရွာဘုရားပွဲဆိုရင် ဝက်သားစားရမှာ သေချာတယ်။ ဘယ်လိုမျိုးရတာလဲတော့ မသိဘူး၊ ဘုရားပွဲဆိုရင်ဝက်သားစားကြရတဲ့အခါအဲဒီလို ကုသိုလ်ဆိုပြီး လုပ်တဲ့အထဲမယ် အကုသိုလ်တွေက ပါလာတယ်။ အကုသိုလ်လုပ်တယ်ဆိုတာ တချို့က ငါ အကုသိုလ်မရှိဘူးလို့ ဒီလိုပြောကောင်းပြောလိမ့်မယ်။ အကုသိုလ်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာ ဘယ်လိုပြောရသလဲဆိုတော့ `ကိုယ်တိုင်၊ တိုက်တွန်း၊ …